Ungabeka kanjani amafulegi wezwe ku-Twitter / hashflags | Izindaba zamagajethi
Namuhla kuqala iNdebe yoMhlaba yaseBrazil, kunzima ukuhlangana nomuntu ongakatholi okwamanje. Izolo sikutshele ukuthi ungayifaka kanjani yonke imidlalo yeNdebe Yomhlaba ku-ajenda yakho, ukuze ukwazi ukulandela izwe lethu noma imidlalo esithakazelisa kakhulu.
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule i-Twitter inike amandla lokhu kungenzeka engeza inani elengeziwe kuma-tweets. Ukwenza lesi simemezelo, iTwitter iqashe lo mculi uShakira lapho nge-tweet yakhe akhombisa khona ukuthi ama-tweets azohambisana kanjani namafulegi amazwe abambe iqhaza kwiNdebe yoMhlaba eBrazil.
Ukuze ungeze amafulegi ku- ama-tweets kufanele nje sibhale # nama-initials amathathu okuqala ezwe. Isibonelo #ESP yeSpain, #BRA yeBrazil, #FRA yeFrance, #COL yeColombia njalonjalo kwamanye amazwe. Uma ubhala ama-tweets ngqo kusuka kwikhompyutha yakho, amafulegi azovela ngokushesha.
Ngakolunye uhlangothi, uma ubhala ama-tweets kusuka ekusetshenzisweni kweselula yakho, kungaba i-Android, iOS noma iWindows Phone, mhlawumbe ngeke zivele ngokushesha. Akuyona inkinga ngohlelo lokusebenza, kepha i-Twitter inika amandla insiza ukuze itholakale nakumadivayisi eselula, okuyilapho kulotshiwe khona iningi lama-tweets.
Lolu hlelo lokungeza inani elengeziwe kuma-tweets we I-Twitter yaqala ukusetshenziswa ngesikhathi seNdebe yoMhlaba eyayiseNingizimu Afrika eminyakeni emine edlule, nokuthi sonke siyakhumbula ngokuba yiNdebe Yomhlaba yebhola yokuqala enqotshwe yiqembu laseSpain. Ngubani ozonqoba iNdebe yoMhlaba kulo nyaka? Ingabe ukhona onesibindi?
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Amanethiwekhi omphakathi » Ungabeka kanjani amafulegi wezwe ku-Twitter / hashflags
Ungazivula kanjani izinhlelo zokusebenza nge-Windows 7 lock on
Umdlalo omuhle unosuku neFIFA 15 ngoSepthemba